Shirkadaha Solar PV Cable iyo Warshadaha - Soosaarayaasha Shiinaha ee Solar PV Cable
Khadka Cagaaran ee Cagaaran ee Cagaaran ee Cagaaran ee Cagaaran ee Cagaaran waxaa lagu dabaqayaa qalabka korantada qoraxda ee dhalinta korantada iyo waxyaabaha la xiriira ee xarkaha, iskuxirka, gaar ahaan ku haboon banaanka. , badbaado badan.
1000V TUV PV1-F Solar Cable 4mm Soosaaraha waa qaybo gaar ah oo loo adeegsado nidaamka tamarta qorraxda si ay ugu xiraan korantada qoraxda iyo sanduuqa korantada.They waa iska caabbinta UV waxayna ka shaqeyn karaan bannaanka jawiga xad dhaafka ah, Ozone, Hydrolysis oo u adkeysan 25years.
DC Cable 1500V H1Z2Z2-K Solar Panel fiilooyinka 6mm2 waxaa loo isticmaalaa nidaamka awoodda Photovoltaic si loogu xiro miraha qoraxda iyo Solar Inverter ama sanduuqa isku darka Solar.They waa UV iska caabinta waxayna ka shaqeyn karaan dibedda heerkulka min -40 ℃ ilaa 120 ℃ oo leh 25 sano nolosha shaqada.
TUV 2PfG 1169 Daawooyinka Solar PV Cable 6mm 1000V
TUV 2PfG 1169 Pure copper Solar PV Cable 6mm 1000V waa qaybo takhasus leh oo loo isticmaalo isku xirka korantada qoraxda iyo sanduuqa korantada ee nidaamka Solar.
2way Solar Cable Clip SUS Panel Clamp waxaa loo isticmaalaa maareynta silsilada qorraxda, waxaa sidoo kale loo magacaabay alwaaxyada birta ee aan xirnayn, xiriirada qoraxda.
Xarkaha siligga ah ee loo yaqaan 'UV silig PV' oo ciriiri ah Solar Cable Tie waxaa loo isticmaalaa maareynta siligga qoraxda, agabku waxay leeyihiin 304 silsilad bir aan xirnayn iyo xargaha caagga ah ee Nylon.It waxay gacan ka geysan kartaa in la dejiyo fiilada qoraxda si fiican looga helo qoraxda, si looga ilaaliyo fiilada qoraxda inay hoos u dhacdo iyo waxyeelo.